तपाई पत्याउनु हुन्छ ? महिलाको पहिलो रोजाइमा लजालु पुरुषको शुक्रकिट » Khulla Sanchar
तपाई पत्याउनु हुन्छ ? महिलाको पहिलो रोजाइमा लजालु पुरुषको शुक्रकिट
काठमाडौँ- सूचना प्रविधिको आजको युगमा हरेक चिज अनलाइन बजारमै उपलब्ध छन् । क्लिक गरेको भरमा चाहेको कुरा पाउन सकिने जमाना आइसक्यो । मोबाइल, ट्याब, फर्निचर, खानेकुरा, लत्ताकपडा त सामान्य भैसक्यो । इन्टरनेटको बजारमा शुक्रकिट समेत उपलब्ध हुन थालेको छ ।
इन्टरनेटमै शुक्रकिटको उपलब्धताले होला शुक्रकिट प्रति महिलाको छनौटको अधिकार पनि विस्तार भएको छ र रुची पनि बदलिएको छ । एक अध्ययन अनुसार महिलाहरुले ज्ञानी, स्मार्ट तथा लजालु पुरुषको शुक्रकिटलाई पहिलो रोजाइमा पार्दछन् ।
यो अध्ययन २३ देखि ६६ वर्ष उमेर समूहका व्यक्तिहरुमा गरिएको थियो । अनलाइन सर्भेका क्रममा समाजको मतलब नराख्ने तथा स्वार्थी र रिसाहा पुरुषहरुको शुक्रकिट लिन महिलाहरुले ठाडै अस्विकार गर्ने गरेको पाइयो ।
अध्ययनका क्रममा अस्ट्रेलिया, क्यानडा, बेलायत, इटाली, स्विडेन तथा अमेरिकाका महिलाहरुलाई सहभागी गराइएको थियो ।